Banijya News | तरलता अभाव हुँदै गर्दा बैंकले निक्षेपको ब्याज दर घटाए, कुन बैंकको कति ? - Banijya News तरलता अभाव हुँदै गर्दा बैंकले निक्षेपको ब्याज दर घटाए, कुन बैंकको कति ? - Banijya News
तरलता अभाव हुँदै गर्दा बैंकले निक्षेपको ब्याज दर घटाए, कुन बैंकको कति ?
बैशाख १ गतेबाट लागू हुने गरी अधिकांश बैंकले ब्याज दर प्रकाशित गरेका छन् । अहिले सञ्चालनमा रहेका २७ वाणिज्य बैंकहरुमध्ये मंगलबार सम्म २२ वाणिज्य बैंकले ब्याज प्रकाशित गरेका हुन् । ब्याजदर प्रकासित गर्ने अधिकांश बैंकले ब्याजदर घटाएका राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । यद्यपि, केही बैंकहरूले भने ब्याजदर बढाएका छन् । धेरैजसोले ब्याजलाई यथावत नै राखेका छन् । नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई कर्जा तथा निक्षेपको ब्याजदर परिवर्तन गर्दा ब्याजदर लागू हुने महिनाको अघिल्लो मसान्तमा विवरण सार्वजनिक गर्न निर्देशन दिएको थियो ।
प्रायःजसो बैंक तथा वित्तीय संस्थाले त्रैमासिक रूपमा आफ्नो ब्याजदरको ‘बेस रेट’ परिवर्तन गर्दै आएका छन् । ब्याजदर परिर्वतन गरेका केही बैंकले बचतको ब्याज घटबढ गरेका छन् भने केहीले मुद्दतीको ब्याजदर पनि तल–माथि गरेका छन् । चैत मसान्तसम्ममा बैंकहरूको निक्षेपभन्दा कर्जा लगानी बढी रहेकाले बजारमा तरलता अभाव हुने हल्ला चलिरहेका बेला बैंकहरूले ब्याज घटाएका हुन् । पछिल्लो समय बैंकहरूले उच्च लगानी गर्दा कर्जा–पुँजी–निक्षेप अनुपात (सिसिडी रेसियो) सीमा सकिएकाले केही बैंकले भने निक्षेप बढाउनकै लागि ब्याज बढाएका विश्लेषकहरू बताउँछन् ।
कुन बैंकले कति ब्याजदर घटाए ?
एनएमबि बैंकले पनि निक्षेपको ब्याज दर घटाएको छ। बैंकले ३.१ देखि ५.१ प्रतिशतसम्म दिँदै आएकोमा घटाएर २ देखि ४ प्रतिशत कायम गरेको छ। त्यस्तै, निक्षेपमा ब्याजदर घटाएपछि त्यसको असर मुद्दतीमा परेको छ। मुद्दती ब्याजदर अधिकतम ८ प्रतिशत रहेकोमा ७ प्रतिशतमा झारिएको छ।
मेगा बैंकले निक्षेपको ब्याजदर सबैभन्दा धेरै घटाएको छ। यसअघि ३.५ देखि ५.५ प्रतिशतसम्म ब्याज दिँदै आएको बैंकले २ प्रतिशतले घटाएर १.७५ देखि ३.५ प्रतिशत कायम गरेको छ। मुद्दतीमा ७.२५ प्रतिशतसम्म ब्याज दिँदै आएकोमा ६.७५ प्रतिशतमा झारेको छ।
सनराइज बैंकले पनि निक्षेप ब्याजदर घटाएको छ । यसअघि २.५ देखि ४ प्रतिशतसम्म ब्याज दिँदै आएको थियो। बैंकले ०.५ प्रतिशतले घटाएर बचतको ब्याज २ देखि ३.५ प्रतिशतमा झारेको छ। तर, मुद्दती निक्षेपमा दिँदै आएको सात प्रतिशत ब्याजदरलाई भने निरन्तरता दिएको छ ।
नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकले बचतको न्युनतम ब्याज दर २ प्रतिशतलाई बढाएर २.२५ प्रतिशत पुर्याएको छ भने अधिकतम ब्याज ४ प्रतिशत यथावत राखेको छ। त्यस्तै,मुद्दती निक्षेपमा यसअघि दिँदै आएको सात प्रतिशतको ब्याजलाई बढाएर ७.२५ प्रतिशत पुर्याएको छ।
कुमारी बैंकले निक्षेपको ब्याज बढाएको छ । न्युनतम २ देखि ४ प्रतिशत दिँदै आएको बैंकले अहिले २.५३ देखि ४.५३ प्रतिशत पुर्याएको छ । मुद्दती निक्षेपमा पनि सात प्रतिशत दिँदै आएकोमा बढाएर बैंकले अधिकतम ब्याज ७.२५ प्रतिशत पुर्याएको छ।
बैंक अफ काठमान्डूले निक्षेपको ब्याज बढाएको छ। बैंकले २ देखि ३.५ प्रतिशतसम्म दिँदै आएकोमा अहिले बढाएर ३.१ देखि ४.६ प्रतिशत पुर्याएको छ । बैंकको मुद्दतीको ब्याज अधिकतम सात प्रतिशतबाट ७.६ प्रतिशतसम्म पुगेको छ।
माछापुच्छे बैंकले भने निक्षेपको ब्याजमा कुनै परिर्वतन गरेको छैन। यसअघि बैंकले दुईदेखि चार प्रतिशत ब्याज दिँदै आएकोमा त्यसैलाई निरन्तरता दिएको छ । मुद्दतीको ब्याज सात प्रतिशत पनि यथावत राखेको छ।
प्रभु बैंकले निक्षेप र मुद्दती निक्षेपको ब्याजदर परिर्वतन गरेको छैन। मुद्दतीमा अधिकतम सात प्रतिशत र निक्षेपमा दुईदेखि चार प्रतिशत ब्याज दिँदै आएको छ।
हिमालयन बैंकले निक्षेपको ब्याज यसअघिकै २ देखि ४ प्रतिशत यथावत राखेको छ। मुद्दतीको ब्याज पनि अधिकतम सात प्रतिशत दिँदै आएको छ।
सरकारको स्वामित्वमा रहेका राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकले निक्षेपको ब्याज ३ देखि ५ प्रतिशत रहेकोमा यसैलाई निरन्तरता दिएको छ। मुद्दतीमा पनि बैंकले ७.२५ प्रतिशतलाई निरन्तरता दिएको छ।
नेपाल बैंक लिमिटेडले निक्षेपमा २.५ देखि ४ प्रतिशत दिँदै आएको ब्याजलाई निरन्तरता दिएको छ। मुद्दतीमा नेपाल बैंकले पुरानै सात प्रतिशत कायम गरेको छ।
नेपाल एसबिआई बैंकले निक्षेपका सबै ब्याजदर ३ प्रतिशत कायम गरेको छ। यसअघि २ देखि ३ प्रतिशत दिँदै आएको थियो। तर, मुद्दतीको ब्याज दर भने बढाएको छ। अधिकतम साढे ६ प्रतिशत पाउँदै आएकोमा बढाएर ८ प्रतिशत पुर्याएको छ।
कृषि विकास बैंकले ३.५ देखि पाँच प्रतिशतसम्मको ब्याजलाई निरन्तरता दिएको छ। मुद्दतीको अधिकतम सात प्रतिशतलाई बढाएर ७.२५ प्रतिशत पुर्याएको छ।
सिद्धार्थ बैंकले बचतको ब्याज दर २ देखि ४ प्रतिशतलाई यथावत राखेको छ। मुद्दतीको ब्याज अधिकतम सात प्रतिशतलाई निरन्तरता दिएको छ।
एभरेष्ट बैंकले निक्षेपको न्युनतम २ देखि ४ प्रतिशत ब्याजलाई निरन्तरता दिँदै मुद्दतीको अधिकतम ब्याज ६.७५ प्रतिशतलाई पनि कायम राखेको छ ।
सेन्चुरी कमर्सियल बैंकले बचतको ब्याजदर २.७५ देखि ४.७५ प्रतिशत राखेकोमा त्यसैलाई निरन्तरता दिएको छ। मुद्दतीको ब्याजदर ७.७५ प्रतिशतलाई भने यथावत राखेको छ।
स्टान्डर्ड चार्टर्ड बैंकले बचतमा दिँदै आएको २.२५ देखि ४ प्रतिशत र मुद्दतीमा दिँदै आएको अधिकतम ब्याजदर ६ प्रतिशत यथावत राखेको छ।